Qeerroo hararage falamadhu akkatii walii dirimadhuu calanqoo itti mudii – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQeerroo hararage falamadhu akkatii walii dirimadhuu calanqoo itti mudii
ONN: Diigamuu Moo Tokkoomuu EPRDF Keessatti, Kamtu Dursuu Qabaa? Eenyutu Caalaa Fayyadamaa? Eenyut
ONN: Diigamuu Moo Tokkoomuu EPRDF Keessatti, Kamtu Dursuu Qabaa? Eenyutu Caalaa Fayyadamaa? Eenyutu Caalaatti Miidhama Laataa? Obbo Caalaa Hayiluu (Hayyu Polotikaa fi Barreessaa) Wajjin Maree.
OMN: Oduu Galgalaa (Fulbaana 25, 2019)
Haala Adeemsa kabaja Irreechaa Qeerrodhaan gaggeeffamu
Via Firaa’ol Ahmad
Irreechi baranaa qabsoo gootonni Oromoo waggaa 150 gabrummaa habashaa ofirraa deebisuuf godhaa turaniin bakka deebi’ee kan kabajamu tahuun adda isa godha.
Irreechi baranaa gaachana sabaa Qeerrodhaan hoogganama.
Qeerroo fi ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa hundarraa alaabaa gootonni Oromoo jalatti wareegaman qabachuun dhufuu.
Gara Finfinneetti yeroo dhufnu kopha kophaa osoo hin taane gurmuudhan socho’uu.
Yeroo gara Finfinnee seennu Oromoon gurmuudhan heddummaachudhaan daandii guutee socho’uu.
Dhaadannoo garaa garaa, Geerarsa, Sirboota, qabsoo garaa garaa fi dhiichisa garaa garaatin Finfinneen teenya tahuu agarsiisuu.
Mootummaa fi dhaabbilee siyaasatiifis Qeerron Oromoo dhaadannoo fi sirboota garaa garaan akeekkachiisa dhumaa kennuufii.
Qaamota ergama diinummaa fudhatanii socho’an Qeerroo fi uummanni Oromoo hundi waardiyyaa tahuun eeguu.
Guyyaa jala bultii irraa eegaluun daandin Gara irreechatti geessu qaamni mootummaa akka cufu itti himuu.
Ayyaanni kuni nagaan xumuramuun dirqama waan taheef Oromoon hundi dirqama kana fudhatee nageenya isaa eeggachuu. Qaama shakke kamuu akja sakatta’amu qaamota nagaa eegsisaniif eeruu kennuu.
Qaamonni ergama fudhatan yeroo nuti daandii irra deemnu nu arrabsuu, dhakaa darbachuun miira keessa nu galchuuf yaaluu waan dandahaniif obsaan bira darbaa.
#Hubadhaa; Akkuma nuti ayyaana kana kabajachuuf itti hawwiin eegaa jirru diinni immoo fashaleessudhaaf shira xaxaa jirtii. Guyyaan kuni cidha guddaa Oromoo waan taheef waan kamuu yoo diinni kan raawwattu tahe Oromoon obsaan bira darbuun nageenya ayyaanichaa mirkaneeffachuutu nurra jiraata.
Kutaa 4ffaa itti aansudhaan dhiheessina.
Dr. Abiyyii Ahmad qabsoo Oromoo aangootti isa baase gane
MM Dr. Abiyyii Ahmad qabsoon Oromoo akka aangootti isa hin baasin kan dubbate gaafa tokko jedhee Haylamaaram Dassaaleny irraa aangoo fudhatuudha. Haasawa isaa jalqabaa sana keessatti akka inni aangoo qabatu kan isa godhe qabsoo Qeerroo ykn uummataa tahuu osoon taane haati isaa wayta inni daa’imaa mootii Itoophiyaa 7ffaa akka tahu itti himuu isaati. Ammas Dr. Abiyyiin Oromootu qabsaa’ee aangootti na baase jechaa hin jiru. Eebba haadha kootti aangootti na baase jedhe. Guyyaa tokko waa’ee qabsoo dubbatee hin beeku. Kan inni Oromoo maqaa dhahu gaafa rakkoo qofa. Gaafa baldhoo warra immiyyee faarsu waammata. Uummanni Oromoo nutuu aangootti isa baase jedhee yeroo yeroon haa dubbatu malee inni guyyaa tokkollee aangon kan uummataatii isintuu aangootti na baase hin jenne. Qabsoodhan akka masaraa gale hin amanu. Eebba haadhatu masaraa na galche jedhee amana. Kanaaf qabsoo uummanni Oromoo wareega qaalii itti kaffale zeeron baay’isee qabsoo Oromoo ganee habashaa faarsuu kan eegaleef. Sabboonummaa Oromoo xiqqeessee sabboonummaa habashaa kan faarsuf.
Oromiyaa diigee Itoophiyaa duraanii kan ijaaruf dhaadatuuf. Dr. Abiyyiin uummata Oromoof tuffii guddaa qaba. Habashaa faarsudhaan masaraa mootummaa keessatti Oromoo kan arrabsiisuf tufii uummata Oromoo irraa qabuufi.
Seife Nebelbal Radio Interviews Samiha Osman, OLF CC and Tadios Abdisa